အီးမေးလ်၊ SMS နှင့်လူမှုရေးစျေးကွက် Martech Zone
Martech Zone စာရှုသူများရနိုင်သည် Mailigen ၏ ၂၅၀၀-၅၀၀၀ နှုန်းထားများအတွက် ၆ လသက်တမ်း ၄၅% OFF ဒီ post ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate link ကိုအသုံးပြု။ !
မေးလ် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အစပျိုးအီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းနှင့်လူမှုရေးစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ထားသောပလက်ဖောင်းမှကမ်းလှမ်းသည်။ သတင်းအချက်အလက်ကြွယ်ဝသောအီးမေးလ်ဝက်ဘ်ကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်ကိရိယာများဖြင့် analyticsလှုပ်ရှားမှုအခြေပြုအပိုင်း၊ ပထ ၀ ီအနေအထားအရပစ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း၊ Mailigen သည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိစျေးကွက်သမားများအတွက်မှန်ကန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက် - drag'n'drop အယ်ဒီတာ၊ တစ် ဦး ချင်း၊ autoresponder လှုံ့ဆော်မှုများ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီခြေရာခံခြင်းနှင့်အစီရင်ခံခြင်း၊ တက်ကြွသောပါဝင်မှု၊ RSS မှအီးမေးလ်၊ A / B စစ်ဆေးခြင်း၊ စာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စာရင်းခွဲဝေချထားမှု၊ -up ပုံစံများ။
မိုဘိုင်းစျေးကွက် - SMS စာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်သင်၏ SMS စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါလိမ့်မည်။
လူမှုမီဒီယာစျေးကွက် - သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုပါ။ ထိုနည်းဖြင့်သင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများ - အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများပေးပို့ခြင်းသည်သင်၏ပရိသတ်ကိုအပိုင်းများ ခွဲ၍ ဝေဖန်မှုများကိုထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများသည်သုံးစွဲသူများ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုစုဆောင်းပေးပြီးသင့်ဖောက်သည်များအားပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးနိုင်သည်။
ပေါင်းစည်းမှု & API ကို - Mailigen ပလပ်ဂင်များ & API ကို မည်သည့် CRM ကိုမဆို Mailigen စနစ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဝဘ် application, ecommerce platform သို့မဟုတ် CMS စနစ်နှင့်မဆိုချိတ်ဆက်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
များအတွက်ကုန်ပစ္စည်းပေါင်းစည်းမှု မေးလ် WordPress ပါဝင်သည် Zapier, Padiact, Digioh, Magento, Jira၊ Esponce၊ FreeAgent, Pushover, Pipedrive, StatsMix, SugarCRM, Google Drive, Dropbox, Edocr, Stripe, Xero, Shopify, Capsule CRM, Batchbook, Zoho, Highrise, Harvest, Twitter နှင့် Facebook!
Tags: AB စမ်းသပ်ခြင်းစာရေးသူအသုတ်bounce စီမံခန့်ခွဲမှုCapsule CRMနှုတ်ခမ်းနီDigiohဆွဲပါ n dropdropboxပြောင်းလဲနေသောအကြောင်းအရာEdocrအီးမေးလ်အပိုင်းEsponceFacebook ကFreeAgentGoogle Drive ကိုစပါးရိတ်ရာကာလHighriseJiradeduplication စာရင်းစာရင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစာရင်း segmentmagentoမေးလ်စိတ်ရောဂါpersonalizationရေနံချောင်းPushoverအချိန်နှင့်တပြေးညီအစီရင်ခံခြင်းအချိန်မှန်ခြေရာခံခြင်းအီးမေးလ်ပို့ရန်segmentshopifyပုံစံများကိုစာရင်းသွင်းပါStatsMixအစင်းSugarCRMတွစ်တာစာရင်းသွင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုWordPressXerozapierZoho